Pakistan: Shahid Khaqan Abbasi oo noqonaya Ra’iisal Wasaaraha cusub – Kasmo Newspaper
Pakistan: Shahid Khaqan Abbasi oo noqonaya Ra’iisal Wasaaraha cusub
Updated - August 2, 2017 5:20 pm GMT
London (Kasmo), Shahid Khaqan Abbasi waa Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Pakistan, ka dib markii Talaadadii 1da Agosto, Golaha Shacabka oo ka mid ha 2da garab ee Barlamaanka Islamabad lagu doortay.
R/Wasaarihii hore, Nawaz Shariif, ayaa Maxkamadda Sare ee dalku 28kii July xilkii ka xayuubisay, eedo la xiriira musuqmaasuq lacageed dartood, ka dib markii uu xilka hayay 3 xilli oo midkii u dambeeyay 2013kii soo bilowday.
Abbasi oo horey u ahaa Wasiirka Petrol-ka wuxuu ka soo jeedaa Xisbiga aqlabiyadda haysta ee PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz), wuxuuna soo dhisi doonaa xukuumad cusub oo loo badinayo in ayan ka duwanaan doonin middii hore ee Shariif
Abbasi qudhiisa mucaaradka ayaa eedo la xiriira musuqmaasuq u soo jeedinaya, kuwaas oo ku saabsan qaabkii loo maamulay qandaraasyadii Gaaska Dabiiciga ah (LNG) ee sannadkii 2015kii, xilligii uu Wasiirka Petrol-ka ahaa.
Si kastaba ha ahaatee, sida uu xiganayo Wargayska Dawn ee ka soo baxa Pakistan kiiskaas Guddiga Xisaabi Xil ma leh ee qaranka “NAB” (National Accountants Bureau) ayaa soo afjareen 19kii Disembar 2016kii.
Pakistan waxaa joogitaanka Taleban iyo kooxo kale oo hubaysan halisna ku haya nabadgalyada u sii dheer musuqmaasuq siyaasadeed oo curyaaminaya dhaqaalaha dalka.
Dhambaal uu dhowaan ku qoray Wargayska “Foreign Affairs”, Sayed Fazl-e-Haider, oo wax ka qora arrimaha Koofur Asia, wuxuu ku sharraxayaa sida qareennadu u yihiin kuwii xilka ka qaaday Nawaz Shariif ee ayan Janannadu u ahayn.
Tillaabadaas oo sida ay isaga la tahay muujinaysa in Pakistan ku dhaqmayso hab si qumman u shaqaynaya oo lagu daba gali karo madaxda musuqmaasuqa caadaysata, taas oo wax ka taraysa geeddi-socodka dimuqraadiyeenta dalka.